Indlela uMthetho woNonophelo ojongene noThathaka owenza ngayo abaThatywayo ngabangaphandle
Uncedo lwezonyango kubantu abavela kwamanye amazwe angavunyelwe phantsi kwe-Obamacare, isiKhuseli soPhephelo kunye noMthetho woKhathalelo ongenakunqunyanyiswa usayinwe nguMongameli uBarack Obama ngo-2010. Umthetho wenzelwe ukwenza inshuwalense yezempilo ibe nexabiso eliphezulu kumazwe aseMelika angaphantsi kodwa ayiniki iincwadi ezingekho mthethweni okanye ezingekho mthethweni, ukufikelela kwiinkxaso-mali ezixhaswa ngemali-ntlawulo okanye iikhredithi zokuthenga i-inshorensi yempilo ngokutshintshiselana.
Icandelo elifanelekileyo lomthetho, owaziwa ngokuba yi-Obamacare, yiCandelo 1312 (f) (3), elifundeka kanje:
"Ukufikeleleka kubomi abavumelekileyo. Ukuba umntu akakho, okanye akulindelekanga ukuba kube yithuba lonke elibhalwe kuyo, ummi okanye isizwe saseUnited States okanye umfokazi okhoyo ngokusemthethweni eMelika, umntu ayinakuphathwa njengomntu ofanelekileyo kwaye angayi kuhlanganiswa phantsi kwesicwangciso sempilo esifanelekileyo kwiimarike ezinikezelwa nge-Exchange.
Uncedo lwezonyango kubantu abavela kwamanye amazwe abangekho mthethweni luyafumaneka kwiidolophu ezininzi kulo lonke elaseUnited States, nangona kunjalo. Uphando olwenziwa ngo-2016 lwamabhunga anabantu abaninzi abasemthethweni abafakiweyo abangenazo mthethweni bafumana izibonelelo ezinika izifiki ezingekho mthethweni "ukutyelela izigulane, izibhamu, izidakamizwa zamachiza, iimvavanyo zelabhu kunye nokuhlinzwa." Iinkonzo zihlawula abahlawuli berhafu base-US abangaphezu kwe-1 billion yezigidi ngonyaka. Uphando lwenziwe yi -Wall Street Journal .
"Iinkonzo zihlala zingabizi okanye zikhululekile kubathathi-nxaxheba, abamele baqinisekise ukuba bahlala kwidolophu kodwa bathelwa ukuba isimo sabo sokufuduka asikhathazeki," kubika iphephandaba.
IsiGunyazo somntu ngamnye kunye nabangaphandle
Abaphambukeli abangabikho mthethweni abahlala eUnited States yiyona nxalenye enkulu yabemi ngaphandle kwinshuwalense yezempilo. Kuqikelelwa ukuba ubuninzi besiqingatha sabemi basemthethweni baseUnited States abanalo i-inshorensi yempilo. I-Ofisi yeBhajethi ye-Congressional iqikelele ukuba abafuduki abangekho mthethweni benza i-quarter-quarter of the 30 million non -ured persons in the country.
Abaphambukeli abangabikho mthethweni abaxhomekeke kumyalelo womntu ngamnye wokunakekelwa kwempilo, inqaku eliphikisanayo elixhaswa yiNkundla ePhakamileyo yase-United States ngoJuni 2012 idinga ukuba abaninzi baseMelika bathenge i-inshorensi yezempilo.
Ngenxa yokuba abafuduki abangekho mthethweni abaxhomekeke kumyalelo ngamnye, abahlawulwa ngenxa yokungabikho ncediswa. Ngokwe-Congressional Research Service: "Abangenayo imvume (abangekho mthethweni) abafudukayo baxolelwa ngokusemthethweni kwi-inshorensi yempilo kwaye, ngenxa yoko, abanako ukuhlawulwa ngenxa yokungahambelani."
Abaphambukeli abangekho mthethweni banokufumana unyango olungxamisekileyo phantsi kwezomthetho.
Umbuzo wokuba umthetho wokunakekelwa kwempilo ka-Obama unikezela ukuhanjiswa kwabangaphandle kwamanye amazwe kuye kwaba yinto eqhutywe ngayo ingxoxo kwiminyaka, ngenxa yokuba banako ukufumana unyango kumaziko angxamisekileyo nakwezinye izakhiwo kwinqanaba lendawo.
USihlalo wase-US uStephen King, waseRiphabhliki wase-Iowa, wathi kwintetho ebhaliweyo ka-2009 yokuba umthetho wokunakekelwa kwempilo ka-Obama uza kubonelela ngokukhawuleza kwizigidi ezingama-5.6 izifiki ezingekho mthethweni kuba urhulumente akayi kuqinisekisa ubungqina bobuzwe okanye ukufuduka kwabo bafumana inzuzo yezempilo ehlawulwa ngumhlawuli-ntlawulo. .
"Iintsapho ezingenayo imali esele zixhaswe ngemali kunye neendleko ezinkulu zemali, ayikwazi ukuhlawula i-inshorensi yempilo kwizigidi zabanye abaphambene nomthetho ongekho mthethweni. , "UKumkani wathi.
U Obama uphawula amabango
U-Obama wazama ukucima ukudideka nokujongana neengxelo ezininzi eziphosakeleyo malunga neziphakamiso zakhe kwintetho ka-2009 phambi kwendibano engabonakaliyo kunye neyaziwayo. "Ngoku, kukho nabo bathi banokuthi baqinisekise ukuba abantu bethu abavela kwamanye amazwe bangekho mthethweni." "Inguqulelo endiyicebisayo ayiyi kusebenza kulabo abalapha ngokungekho mthethweni."
Ngaloo mzuzu kwintetho ka-Obama, Rep Republican US Rep. UJoe Wilson waseSouth Carolina wamemeza ngokukhawuleza esithi "Uxoka!" kumongameli.
UWilson kamva wabiza i-White House ixolisa ngenxa yokukhwaza kwakhe, ebiza ngokuthi "ayifanelekanga kwaye ibuhlungu."
URiphabliki wase-US Uyabona uTom Coburn kunye noJohn Barrasso, abachasene nomthetho wokuphucula ukunakekelwa kwempilo, bagxeke ukuphathwa kuka-Obama kwabangaphandle ngokungekho mthethweni kwingxelo ebizwa ngokuba yi "Bad Medicine." Bathi iindleko zokuvumela abafuduki abangekho mthethweni ukuba bafumane unyango lwempilo kumagumbi aphuthumayo baya kubabiza abahlawuli berhafu abahlawuliswa ngezigidi.
"Ukususela ngo-2014, amaMelika aya kuba phantsi kwesigwebo somntu ngamnye we-$ 695 ngonyaka xa bengathengi i-inshurensi yempilo," abameli babhala. "Nangona kunjalo, phantsi komthetho omtsha womthetho, abafuduki abangekho mthethweni abayi kunyanzelwa ukuba bathenge i-inshorensi yezempilo, nangona baya kukwazi ukufumana ukunakekelwa kwempilo-kungakhathaliseki ukuba banakho ukuhlawula-kwisebe eliphuthumayo yesibhedlele."
Abafuduki abangenazo izikhalazo sele bekwazi ukufumana unyango lwezonyango.
"Abangenayo abafaki mthethweni bafumana unyango ngaphandle kokuhlawula, kodwa abemi bajongene nokukhetha i-inshurensi yezempilo eyabiza okanye ukuhlawula irhafu," uCoburn noBarrasso babhala. "Iindleko zempilo yabangaphandle kwamanye amazwe kwizonyango eziphuthumayo ziza kutshintshwa kumaMerika nge-inshorensi."
Utshintsho oluphambi kweKhuseleko loLuntu kwi-COLA?
Indlela yokuLalela iibhodi zeeNdwendwe ezivela kwiNdlu yeNdlu
Ukufudumala kwehlabathi ukukhupheka le Nkulungwane, i-NSF Study Finds
Indawo yokujonga kwiGrama kunye noBumbe
Ukuthelekisa njani iiNveveli ezimbini kwiNcoko yokuBhathanisa
Umgangatho Womoya: Kutheni Ubandezeleka Ngehlobo
Ingqwalasela ye-Dorian Invasion kuGrisi
I-Pros and Consence yokuba yiNqununu yesikolo
Cómo llenar el formulario para lotería de visas para green card e-USA
IiLobes ze-Occipital kunye nePerview Perception
I-Casino Pit Boss - Yenzani i-Bos Boss
Iifrimu ezi-10 eziphezulu zase-Irish
Uluhlu lwadlalwayo: Uzuko loLuthando
Iimpendulo Zemibuzo yeKardashian